मौसम, क्यालकुलेटर, शेयर बजार, कम्पास र आईप्याडका लागि भ्वाईस नोटहरू | आईफोन समाचार
मौसम, क्यालकुलेटर, शेयर बजार, कम्पास र आईप्याडका लागि भ्वाईस नोटहरू
किन एप्पलले आईफोन र आईप्याडमा उस्तै नेटिभ अनुप्रयोगहरू समावेश गर्दैन, बुझ्नै नसकिने छ। आईप्याडमा मौसम, क्यालकुलेटर, स्टक मार्केट, कम्पास र भ्वाइस मेमो अनुप्रयोगहरूको अनुपस्थिति अस्पष्ट छ। भाग्यवस एप स्टोर विशाल छ र हामी धेरै अनुप्रयोगहरू फेला पार्न सक्दछौं जुन अनुपस्थित व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा बदल्न सक्दछ, र हामीले ती छनौट गरेका छौं जुन हाम्रो दृश्यमा नयाँ आईओएस and र आईप्याडमा उत्तम सूट गर्दछन्।
1.3 भ्वाईस नोटहरू
सायद एक कोटीहरू जहाँ यो छनौट गर्न सबैभन्दा गाह्रो छ, अनुप्रयोगहरूको मात्रा र गुणको कारण। मौसम अनुप्रयोगहरूको विस्तृत सूचीबाट जुन हामी आईप्याडका लागि फेला पार्न सक्छौं, जादुई मौसम शायद सबै भन्दा सन्तुलित छ डिजाइन र जानकारी मा। तपाईं विभिन्न स्थानहरू थप्न सक्नुहुन्छ, र मुख्य स्क्रीनमा ती सबै जानकारीको सारांशको साथ हेर्नुहोस्। के तपाइँ थप विवरणहरू चाहानुहुन्छ? तपाईंले विस्तार गर्न चाहानु भएको एकमा क्लिक गर्नुहोस् र सूचनाहरू बढ्छ। एनिमेटेड पृष्ठभूमि पनि धेरै चित्रणात्मक छन्। एक जसले मलाई आईफोनमा मौसम अनुप्रयोगको सबैभन्दा सम्झना दिलाउँछ।
पहिलो अनुप्रयोग मध्ये एक मैले आईकडको दाँया बाहिर खोजिरहेको थिए। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन्, केहि अविश्वसनीय मूल्यको साथ केवल एक क्यालकुलेटर हुन। क्याल्कन एक हुन सक्छ जुन म डिजाईन र मूल्यको लागि मन पराउँछु। निःशुल्क र पनि सार्वभौमिक। क्यालकुलेटर, एकाई रूपान्तरण, र सब भन्दा मांगको लागि उन्नत प्रकार्यहरू। यसले आफ्नो उद्देश्य पूर्णरूपले पूरा गर्दछ।
एस्थेटिकको साथ जुन स्वदेशी आईओएस अनुप्रयोगमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ, स्टक मार्केट प्रो प्रस्ताव गर्दछ तपाईलाई चाहिएको सबै झोला सूचना, पेशेवर उपयोगको लागि लक्षित अनुप्रयोग बन्नको बिना। यद्यपि यसको मूल्यको लागि यो लगभग हुन आवश्यक पर्दछ। म याहू वित्त रुचाउँछु, अनुप्रयोग स्टोरमा पनि उपलब्ध छ, तर संयुक्त राज्यमा मात्र।
रेकर्डर र प्लेयर, सम्भवताको साथ पासवर्डले तपाईंको रेकर्डि। सुरक्षित गर्दछ। रेकर्डर अनुप्रयोग प्रो यसको कोटिमा सब भन्दा पूर्ण अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो (यसको मूल्यको लागि उत्तम)। तपाईं रेकर्डि। पनि ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, र यसले रेकर्डि p पज गर्न लामो साइलेन्स पत्ता लगाउँदछ। तपाइँ क्लाउड भण्डारणमा तपाइँको रेकर्डि saveहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ड्रपबक्स, गुगल ड्राईव वा शुगरसिन्क। यो एक विश्वव्यापी अनुप्रयोग हो।
यदि तपाईं कम्पास र भर्चुअल वास्तविकतालाई मिल्ने अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, स्पाग्लास तपाईंको उत्तर हो। मैले यस प्रकारको अनुप्रयोग कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन, आईओएसले आईफोनमा नेटिभ सामिल पनि समावेश गरेको छैन, तर विनिर्देशहरू र आलोचनाको कारण एप्लिकेसन स्टोरमा एप्लिकेसनमा भएको, सबै भन्दा राम्रो विकल्प देखिन्छ.
थप जानकारी - हप्ताका अपडेटहरू: ड्रपबक्स, अमेजन, गुगल क्रोम र अधिक
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» मौसम, क्यालकुलेटर, शेयर बजार, कम्पास र आईप्याडका लागि भ्वाईस नोटहरू
हराइरहेको प्रकार्यहरू जस्तै प्रभावहरू (जुन फोटोबुथ भन्दा धेरै फरक हुँदैन) Panoramic क्याप्चर र स्लोमोमा रेकर्डिंग आईप्याड एयर र मिनी रेटिना स्क्रिनको साथ सम्भव हुन्छ।
यो कुनै चीजको लागि होइन तर मलाई यो लाग्छ कि तपाइँको "लेख" कम्तीमा भन्न सीमित छ।
तपाईंले राख्नुभएको of मध्ये कुल, १ तपाईंले प्रयास गर्नुभएको छैन र अर्को दुई भुक्तानी गरिएको छ ... र तपाईं भन्नुहुन्छ कि यो "समाधान" गर्दछ कि नेटिभ अनुप्रयोगहरू त्यहाँ छैनन्? यो मलाई जस्तो लाग्दैन ...।
अभिवादन र कृपया, प्रविष्टि प्रकाशित गर्नु अघि सोच्नुहोस् कि यो चाखलाग्दो छ र अर्को प्रविष्टि बिना अर्को प्रविष्टि भर्दैन
गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
सार्वजनिक प्रविष्टिहरू जुन मलाई लाग्छ हाम्रो पाठकहरूको लागि चाखलाग्दो छ, यसको मतलब यो होइन कि यो उनीहरू सबैका लागि हुनेछ। यस्तो देखिन्छ कि कम्तिमा तपाईंले यस्तो सोच्नु भएन।
तर त्यहाँबाट भन्ने हो कि लेख रमाईलो छैन किनभने दुई अनुप्रयोगहरू भुक्तान गरिएको छ, सबै उचित सम्मानका साथ, चीज "नाक पठाउँदछ"।
डायना हिनोजोसा भन्यो
डायना हिनोजोसालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई मौसम तस्बिरहरू र अन्य हेह मन पर्यो
टेम्पल रन २ ले क्रिसमस अपडेट सुरू गर्दछ
ट्रिक: कसरी आईओएस in मा अन्तर्राष्ट्रिय घडीको रूप बदल्न